ISingapore Ivalela AmaNgqina KaYehova Ngenxa Yokholo Lwawo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiBhulu IsiChichewa IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
ISingapore iyawavalela amaNgqina kaYehova aselula kuba nje engavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo. Umthetho welo womkhosi wango-1967 uyalivula ikroba lokuba abantu bangawungeneli umkhosi xa begula okanye ngezinye izizathu, kodwa ke awubakhuseli abo bangafuniyo ukuya ngenxa yokholo lwabo. Ekubeni urhulumente waseSingapore engawahloneli amalungelo abantu abangafuniyo ukuya emkhosini, amaNgqina aye avalelwe izihlandlo ezibini yaye athothoze iinyanga eziyi-39.
Xa umfana oliNgqina esiba neminyaka eyi-18, kuye kufuneke abhalise emkhosini. Xa esala, uvalelwa iinyanga eziyi-15. Xa egqiba kuthothoza elo xesha, uyakhululwa aze ayalelwe ukuba anxibe iyunifomu yomkhosi ukuze aqeqeshwe. Xa ephinda esala, uye athiwe nka ngeenyanga eziyi-24 ngapha kwezitshixo.
ISingapore Iyala Ukuthobela Imithetho YeZizwe Ezimanyeneyo
IZizwe Ezimanyeneyo kudala zibongoza amazwe aphantsi kwazo ukuba “awahlonele amalungelo abantu abangafuniyo ukuya emkhosini ngenxa yokholo lwabo, kuba ngaloo ndlela basebenzisa inkululeko yabo yokucinga, eyesazela neyonqulo ngokutsho kweSindululo Sehlabathi Lonke Samalungelo Abantu.” ISingapore iye yasikhaba ngawo omane isindululo seZizwe Ezimanyeneyo nangona ibililungu lazo ukususela ngo-1965. Kwileta yangoAprili 24, 2002, eyayisiya kwiKomishoni Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo, urhulumente waseSingapore walikhupha latsola elokuba “xa abantu beneenkolelo okanye izenzo ezinxamnye [nokhuseleko lwelizwe], abanakukwazi tu ukuba ngaphezu komthetho kodwa kufuneka kubekwe kuqala ukhuseleko lwelizwe.” Igosa laseSingapore alizange lifihle makhuba kulinywa, laphendula lathi, “Asiyamkeli indlela eniwubona ngayo lo mthetho wokuvula ikroba lokuba abantu bangayi emkhosini ngenxa yokholo lwabo.”
Ukuze ubone uludwe lwamaNgqina kaYehova avalelweyo ngenxa yokholo lwawo eSingapore, cofa le linki ingezantsi.
Babanjelwe Ukholo Lwabo—ESingapore
NgoMatshi 10, 2015
AmaNgqina KaYehova ayi-17 avalelwe entolongweni ngenxa yezazela zawo.
AmaNgqina KaYehova ayi-19 avalelwe entolongweni ngenxa yezazela zawo, kuquka nelinye elingakhange livume ukuba litsha-ntliziyo emkhosini xa kunokuvela imfazwe.
NgoSeptemba 16, 2014
Amadoda angamaNgqina ayi-15 abanjiwe ngenxa yezazela zawo, kuquka indoda enye engakhange ivume ukuba ibe litsha-ntliziyo emkhosini ngexesha lemfazwe
NgoJulayi 30, 2014
AmaNgqina ayi-16 avalelwa ngumkhosi waseSingapore kuba nje engafuni ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo.
AmaNgqina ayi-18 avalelwa kuba nje engafuni ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo.
NgoAprili 24, 2002
Urhulumente waseSingapore waphum’ elubala esithi akayamkeli into yokuba kubekho abantu abangayiyo emkhosini ngenxa yezazela zabo.
Lantinga inani lamaNgqina kaYehova acinezelwayo navalelwayo eSingapore.
NgoAgasti 8, 1994
INkundla Ephakamileyo yaseSingapore iyasikhaba isibheno samaNgqina.
NgoJanuwari 12, 1972
Urhulumente waseSingapore uyawakhupha ezincwadini zomthetho amaNgqina kaYehova.